Izaho dia manana sary sokitra ala-tahaka vita amin’ny halimo izay mampiseho zatovovavy iray antsoina hoe Kristina. Ilay sary sokitra any ifotony izay tena mitovy habe amin’i Kristina dia mitsangana eo amin’ny fefilohan-tseranana iray any Copenhagen, Danemark, ary napetraka teo izy mba hijereny ny ranomasina mankany Ziona. Tsy mora ny fanapahan-keviny ho lasa mpikamban’ny Fiangonana sy handao ny fonenany ary hitanareo fa ilay rivotra manohitra dia mifofofofo mafy mankany aminy. Nijoro ho mafy orina izy teo am-panaovana zavatra tena sarotra iray izay fantany anefa fa marina. Napetrak’ireo taranany teo amin’io fefilohan-tseranana izany sary sokitra izany ho mari-panajana an’i Kristina satria ilay fanapahan-keviny tamin’izay andro izay dia nisy lanjany mandrakizay ho an’ireo taranaka maro.
Maneho anareo tsirairay io sary sokitr’i Kristina io ho ahy. Ianareo dia miatrika fanapahan-kevitra manan-danja maro toa an’i Kristina sy manao safidy isan’andro izay sarotra ny sasany, ary tsy hoe hamaritra fotsiny ny hoavinareo fa ny hoavin’ny taranaka maro koa. Ianareo koa dia miatrika ireo rivotra mahery vaikan’ny fanoherana, ny fitsapana, ny fanerena ataon’ny mitovy taona amin’ny tena ary ny fahalotoana ara-pitondrantena. Kanefa mbola mijoro tsy voahozongozona ianareo ary miaina ny filazantsara eo anatrehan’ireo fitsapana tsy tapaka ao anatin’ny fiaraha-monintsika. Tarihin’ny Fanahy Masina toa an’i Kristina ianareo. Mandray fanapahan-kevitra tsara ianareo. Mahatoky sy mendri-kaja ianareo.
Izaho dia tsy afaka mieritreritra torohevitra manan-danja kokoa avy amin’ny Ray any an-danitra be fitiavana iray noho ilay fangatahany antsika tsirairay mba “hitsangana … eo amin’ny toerana masina, ary tsy hoesorina.”1 Hoy Izy hoe: Miorena mafy. Aoka ianareo tsy ho azo hozongozonina.2 “Mijoroa amin’ny fahamarinana.”3 Mijoroa ho toy ny vavolombelona.4 Aoka ianareo ho fanevan’izao tontolo izao. Mitsangàna amin’ny toerana masina. Noho izany dia zavatra tsotra iray no hafatro ho anareo tsirairay:—“Aza miala.”
Voalohany, aza miala amin’ny fisafidianana ny tsara. Tsy misy fanapahan-kevitra kely ao anatin’izao andro farany izao. Tena manan-danja lehibe ny safidy ataonareo amin’izao fotoana izao. Ny fahafahana misafidy no fanomezana lehibe indrindra nomen’Andriamanitra ny zanany. Tafiditra ao anatin’ilay drafitry ny fahasambarana izay nosafidiantsika sy ianao ary narovantsika sy ianao izany tany amin’ny fiainana talohan’ny nahaterahana. Manàna fiainana izay ahafahana mihaino sy maheno ny Fanahy Masina ary dia hanampy anareo handray fanapahan-kevitra tsara izy. Raha ny marina dia hilaza aminareo “ny zava-drehetra tokony hataonareo” Izy.”5
Herinandro maromaro lasa izay dia izay indray aho vao nandeha niverina tany amin’ny lisea nianarako taloha tao anatin’ny taona maro. Nanatrika fihaonamben’ny tsatòka izay notanterahana tao amin’ny efitranoben’ny sekoly aho. Rehefa nidina niditra ny lalan-tsara aho dia nisy fahatsiarovana maro nanomboka nirotsaka tato an-tsaiko. Nitovy tsara ny zavatra tsapako tamin’izay sy ny zavatra tsapako rehefa handeha hianatra tao fony zatovovavy aho—nitebiteby, tsy natoky ny tena, saro-kenatra ary tena naniry ny hahay hiray tanteraka amin’ny hafa. Niditra ilay efitranobe aho. Nisy fahatsiarovan-javatra maro indray nirotsaka tao an-tsaiko. Fantatro tsara ny antsipirian-javatra rehetra tao amin’io efitranobe io. Ny hany niova dia—izaho.
Tamin’io andro io aho dia nanana fahafahana nijoro teny an-dampihazo toy ny nataoko im-betsaka tao amin’ny lisea tamin’ny naha solontenan’ny mpianatra ahy. Hitako tao anatin’ny mpanatrika tao aza ny sasany tamin’ireo mpiara-mianatra amiko taloha—ny sasany tamin’ireo olona niarahako! Saingy tamin’ity fotoana ity dia tsy nitarika fivoriana aho fa nanana fahafahana—tao amin’io efitranoben’ny liseako io—“hijoro ho vavolombelona”6 sy hizara ny fijoroako ho vavolombelona momba an’i Jesoa Kristy Mpamonjy.
Ry zatovovavy aoka ny fifandraisanareo amin’ny hafa ho toy ny tamin’ny 40 taona lasa toy izany ary tsy miova hatramin’izao, dia tsy ho menatra ianareo. Tsy mendrika ny hanaovana marimaritra iraisana ny fanerena mafy ataon’ny tanora mitovy taona amin’ny tena, na ny fahafahana miditra amin’ny vondrona iray, na ny fahazoana laza. Ny fitarihana amin’ny tsara asehonareo amin’ny zatovolahy dia hanampy azy ireo hitoetra ho mendrika ny hanana ny herin’ny fisoronany sy hanao fanekempihavanana any amin’ny tempoly ary hanao asa fitoriana. Ary iza no mahalala? Rehefa efapolo taona any aoriana any dia mety hisy iray amin’izy ireo hanatona anao mihitsy ao amin’ilay efitranoben’ny liseanao ary hisaotra anao noho ny fanampianao azy hitoetra ho mendrika mba hanatanterahany ny andraikiny ao amin’ny fisoronana mba hanaovany asa fitoriana amim-pahamendrehana. Ary iza no mahafantatra? Mety hahazo taratasy iray avy amin’ny iray amin’ny vadin’ireo zatovolahy ireo ianao, izay misaotra anao izy noho ny fitarihana amin’ny tsara nentinao teo amin’ny vadiny sy ny fianakaviana ho aorin’izy ireo tamin’ny fotoana nianaranao tany amin’ny lisea. Tena manan-danja ny safidy ataonareo. Tsy hoe hisy fiantraikany aminareo fotsiny ihany ny safidy ataonareo fa hisy fiantraikany amin’ny hafa koa. Manan-danja mandrakizay izy ireo. Aza miala!
Faharoa, aza miala amin’ny fanirianareo sy fanoloran-tenanareo hitoetra ho tsara toetra sy hadio ara-pitondrantena. Kolokoloy ny hatsaran-toetra. Ny fahadiovanareo manokana no iray amin’ireo loharanon-kery lehibe indrindra. Rehefa tonga teto an-tany ianareo dia nomena ny fanom